पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ पुष ११ गते १६:३०
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार काम गरिरहेको छ। ऐनअनुसार पाँच वर्षमा पुनःनिर्माणका काम नसकिएपछि प्राधिकरणको म्याद यही पुस १० गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा कामले गति लिएको छ । नगरपालिकासँग सम्बन्धित भवन र सडकको मापदण्डमा असहज पाइएको छ। मापदण्डमा १५ दिनमा नक्सापास हुनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा ढिला भइरहेको पुनःनिर्माण छिटो गर्न दक्ष निर्माणकर्मी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार परिचालन गरिएको छ । समस्या के हो त्यो ल्याएर समाधानमा सहयोग गर्न सामाजिक परिचालकले सहयोग गर्छन् । सहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गामा बनेका घरमा भाइभाइको आन्तरिक समस्या छ । त्यो समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न सक्दैन । बहुस्वामित्वले पनि शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । बहु स्वामित्वसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सहयोगस्वरुप अनुदानमा तीन लाख दिने हो । घर पूरै पुनःनिर्माण गरिदिने होइन । पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही आफैँले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरुले घर बनाउन थाल्नुपर्‍यो ।
घर बनाउनेले आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लगिसक्नुपर्छ। अब अवधि थपिँदैन । माघ मसान्तसम्म दोस्रो र वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो पाउन आवेदन दिइसक्नुपर्छ ।
घर बनाउन अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने अर्को स्थानमा घर भएका लाभग्राही हुन् । घर नभएर पनि अनुदान सम्झौता गरेर बसेकाले पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिएर पुनःनिर्माण सुरू गर्नुपर्छ । गाउँको घर भत्केर सदरमुकाम वा काठमाडौँको घरमा बस्नेले घर बनाएका छैनन् । आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छ ।
स्थानीयलाई सहभागी गराएर नै कला, संस्कृतिको संरक्षण गरिएको छ । रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा माटो भर्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरियो । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर टेण्डरमार्फत निर्माण भएको छ । मन्दिर त विशिष्ट श्रेणीको थियो । यसैले निर्माण व्यवसायी नै चाहियो। यो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनःनिर्माण भएको छ । सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि सुरूमा ढिला भएको हो । धेरै सम्पदा चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीनस्वरुपमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुरानैस्वरुपमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ? यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
गैरसरकारी संस्थाबाट रु ९० अर्बको काम गर्ने सम्झौता भएकामा रु ६२ अर्बको काम सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । गैससले गरेका कामको अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको छ ।
यो विश्वकै ठूलो पुनःनिर्माण हो । हिमालमा तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न सकिँदैन । काम गर्न मिल्ने बेलामा स्रोत हुँदैन । आवश्यक मात्रामा बजेट पाउन सकेको भए अघिल्लो वर्षमै पुनःनिर्माण सकिने थियो । शुरुका वर्षमा पुनःनिर्माणका लागि जनशक्ति समेत थिएन । तालिम दिएर एक लाख दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन गरिएको छ । यसबीचमा नेतृत्व परिवर्तन भएपनि काम गर्ने गति परिवर्तन भएन । विभिन्न क्षेत्रका मानिसले गरेका अनुभव लगायत सबै विषय अभिलेखीकरण गरी राखिने छ ।
यी अनुभव समेटेर मैले कुनै बेला पुस्तक लेख्नेछु। धेरै कथा, व्यथा छ । धैर्यता र लगनशीलताले परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । भूमिहीन, गुठी समस्या भएका लाभग्राहीका समस्या कानून परिवर्तन गरेर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परामर्श परिषद्मा सबै दलका नेता बसेर प्राधिकरणका कामको प्रसंशा भएको छ । विकास सहायता समितिले पनि प्रशंसा गरेको छ । गर्व गर्न लायक काम भएको समितिको ठहर छ । विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्राधिकरणले स्थापित गरेको छ । रासस
एमाले सुदूरपश्चिम इन्चार्जको विवाद मिलाउने जिम्मा ओलीलाई
नेकपा (एस)का यी हुन् मन्त्रीमा सिफारिस भएका नामहरू
माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई बैंकक लगिँदै
मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी, कुन दलले कति पाउँछन् मन्त्रालय ?
काठमाडौंमा बन्धक बनाई राखेकी महिला बलात्कार गर्ने पक्राउ
आईपीएल क्रिकेटमा सनराइजर्ससँग राजस्थान पराजित